Phantse i-75% yazo zonke iintsilelo ekuhlaleni izityalo zangaphakathi zivela ekungenakulungeni ukuzinzisa ngokufanelekileyo. Kubonakala nje ukuba akukho nto inzima ukunkcenkceshela. Zihlolisise: ngaba ulandela imigaqo ebalulekileyo.
1. Amanzi izityalo kuphela ngamanzi afudumele.
Amanzi, aneqondo lokushisa malunga nama-0 degrees, angene kwiingcambu ezi-7 ezicothayo kunamanzi kwiqondo lokushisa. Ngona izityalo ezigulayo, ukuba zityiliswa ngamanzi afudumele (i-20-25 degrees), ziya kubuya. Eyona nto ingonakalisa ukuthambisa ngamanzi abandayo ehlobo, ekushiseni.
2. Amanzi okunkcenkceshela kufuneka athambile.
Umxhesho ogqithiseleyo wamanzi wamanxilumu e-calcium kunye nosawoti wokubala wezityalo uyingozi. Ngenxa yoko, izinga le-acidity (pH) litshintsha emhlabeni, kwaye iingubo ezincinci zesoti zivela ngendlela yeekristal ezimhlophe kwiindwangu kunye neendonga zebhodini. Abaxhasi baphazamisa iinkqubo eziqhelekileyo zokutshintshwa kwegesi kunye ne-photosynthesis.
Ngezolo lokuthambisa, soloko uvumela amanzi ukuba ahlale. Susa iintshaba (iintsuku ezili-15) ukusuka emhlabeni, iindonga zeembiza, ukusuka kumagqabi.
3. Musa ukuzalisa kwaye ungadli izityalo!
Ukungaphumeleli ekugcinweni kwezindlu, kunye nokungazithobeki, ngokuqhelekileyo kuhambelana nokuphuphuma okanye ukuphuphuma. Zombini ziyingozi kwizityalo.
Apha kufuneka udibane nesityalo ngasinye. Nangona kunjalo, kukho imigaqo emibini jikelele:
Ngethuba lokukhula okusebenzayo kokuthambisa izityalo kuqinisiwe, ngexesha lokuphumla - sinciphisa.
Ehlotyeni sininzi ngamanzi kwaye kaninzi .
Izityalo ezigulayo, zitshintshwe nje, zinezityalo ezincinci, ezingazalwanga ngokupheleleyo, ebhodweni elikhulu, ezikhulayo kumhlaba wodongwe, zanisela ngobunono kwaye ziqaphele.
Ukunkcenkceshela kuninzi kufuna ama-succulents (i-cacti, i-agaves, i-alo, i-sedomas, i-lithopses) kunye nezityalo ezinqabileyo ezishiya ixesha lokuphumla.
Ukunisela okucwangcisiweyo kuyadingeka kwizityalo ezinamaqabunga amaqabunga okanye ama-pubescent (i-senpolia, i-peralia, i-columbney), iibrafu ezintle (i-chlorophytum, i-asparagus), enee-rhizomes ezinamandla kunye neengcambu ezinqabileyo (i-dracenes, i-cordillins, i-sansevieri, isundu, imile), i-onion (zefirantes). Akunamanzi ngokukhawuleza emva kokumiswa komhlaba, kodwa kuphela emva kweentsuku ezi-1-2 emva kokumisa okongeziweyo.
Ukuthambisa okuninzi kukuthandwa yizityalo ezitshatyalaliswayo, ezinqabileyo, ezinqabileyo, ezinqabileyo (ama-adiantums, ferns, fittones). Ezinye izityalo ezinamaqabunga ezinqabileyo (i-citrus, ikhofi, igadi, i-camellia) kwaye ungamelani nokuma. Baphuziswa ngokukhawuleza emva kokumisa komhlaba.
4. Amanzi amaninzi, kodwa amancinci!
Kubalulekile ukuba udibanise ngokupheleleyo umhlaba-amanzi kufuneka athululele kwi-pallet. Emva kwemizuzu engama-30, kufuneka uchithe amanzi ukusuka kwi-tray. Yiyeke ukuba akunakwenzeka ukuphepha ukucima izimpande.
Ezinye izityalo zixutywa kwi-pallet: i-tulips, i-cyclamen, enye i-bulbous ne-tuberous, ephosa ngokukhawuleza, ukuba "ithulule". Nangona kunjalo, amanzi epanini akakwazi ukushiya ixesha elide. I-tray yokugaya kufuneka ibe nzulu ngokwaneleyo ukuze amanzi anele ukwanela ukunkcenkceshela.
Izityalo ezingaphandle: i-Selaginella
I-Bulbous Muscari Iintyatyambo: Unonophelo
Ukulima kunye nokunyamekela i-flower mammilia
Izityalo zangaphakathi: hedera
Indlela yokuhlela umhla wokuzalwa komntwana?
Iingcamango malunga nokuhamba ngeendlela: indlela yokusinda ekuthunjweni kobuxoki
I-potato ne-zucchini casserole ngeeshizi
Indlela yokukhetha i-toothpaste efanelekileyo?
Inkumbulo kaDmitry Marianov: amabali avela kubomi bomdlali, abambalwa ababaziyo
Isondo kunye nomfazi otywalayo